မန္တလေး အစ္စလာမ်သာသနာပိုင်နယ်မြေတစ်ခုအား Oxygen Plant တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ယာယီ အသုံးပြုခွင့်ပေး - Myanmar Pressphoto Agency
News July 14, 2021 ·0Comment
မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်သာသနာပိုင် နယ်မြေတစ်ခုအား COVID အတွက် လိုအပ်သည့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ပြု လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ယာယီအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမြေနေရာတွင် Oxygen Plant တစ်ခုအား အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် မတည် တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း Pant နှင့်အတူ Oxygen 40 Liters ၉၀၀ အိုး မတည်လှူဒါန်းပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
” ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမြေနေရာကို ကိုဗစ်အတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ကို မန္တလေးတိုင်း အစ္စလာမ် ဘာသာရေးလူမှုရေးအဖွဲ့က တောင်းဆိုလာတော့ ကျွန်တော်တို့က ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ အ ပြင်ကို ခုတစ်လော အောက်စီဂျင် ရှာရခက်တဲ့ ပြ ဿနာတွေဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး Oxygen Plantတစ်ခု တည်ဆောက် ပေးမယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အောက်စီဂျင် အိုးပေါ့နော် ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာ နှစ်လုံး စုစုပေါင်း 40 Liters အိုးပေါင်း ၉၀၀ လှူဒါန်းဖို့ မှာထားပြီး ပြီ။” ဟု အစ္စလာမ်သာသနာကောင်စီရေးရာ အ တွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးတင်မောင်သန်းက MPA သို့ပြောသည်။
ယင်းမြေနေရာအား COVID-19 တတိယလှိုင်း ပြင်းထန်နေသဖြင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ လုပ် ဆောင်နိုင်ရန် ယာယီခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရောဂါပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိပါက ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
” ဒီမြေနေရာက ကျွန်တော်တို့ ပထမလှိုင်းရော ဒတိယလှိုင်းမှာရော ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ အ တွက် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သလိုပဲ ခုတတိယလှိုင်းအ တွက် ယာယီခွင့်ပြုခဲ့တာပေါ့။ ဒီ အခြေအနေအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်ပြီလို့ ယူဆရင် အစည်းအဝေးတစ်ခုပြန်လုပ်ပြီး ရုတ်သိမ်းသွားဖို့ရှိတယ်။” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းမြေနေရာ အကျယ်အဝန်းအရ Oxygen Plant အပြင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာများကိုပါ လက်ခံ ကုသပေးနိုင်ရန်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာရေး လူမှုရေးပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများက ကျွမ်း ကျင်သူ ဆရာဝန်များနှင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ပြီး လူမျိုးဘာသာမရွေး အောက်ဆီဂျင်လာရောက် ရယူနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
လတ်တလောတွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာများအနေဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခွင့်မရဘဲ မိမိအိမ်၌ Homeကွာရန်တင်းဖြင့် ကုသနေရ သည့်အပြင် လိုအပ်သည့် အောက်ဆီဂျင်ရရှိနိုင်ရန် အခက်အခဲများစွာဖြင့် ရှာဖွေနေရပြီး အောက်ဆီဂျင်အချိန်မီမရ၍ သေဆုံးနေရခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
မန္တလေးမြို့သည် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှု နှင့်သေဆုံးမှုမြင့်တက်နေသဖြင့် မြို့တွင်း ခုနစ် မြို့အား Stay at Home သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
#COVID-19 #အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်း #အောက်စီဂျင် #ပရဟိတ #MPA
Mandalay Islamic Religious Land Allowed for Building Oxygen Plants
An Islamic religious land in Pyigyidagun township of Mandalay has been temporarily allowed to be used for charity activities for COVID-19.
An oxygen plant will be built on the land with the support of merchants and Islamic religious organizations and 40 liters of oxygen (900 tanks) will be donated as well.
“As Mandalay Islamic religious organizations requested us to use this land for COVID-19 charity activities, we allowed them. In addition, as oxygen tanks are very rare these days, we’re going to build an oxygen plant with the support of our religious leaders and merchants.
And then, we’ve already ordered to donate two 20-foot containers of oxygen which will hold 40 liters (900 tanks) of oxygen,” said U Tin Maung Than, secretary-general of the Islamic Council, to MPA.
The land is temporarily permitted for use for charity activities as COVID-19 third wave is severely raging and it will be withdrawn once the virus is put under control.
“We gaveatemporary permission just like we did in the first and second waves to use the land for charity activities for the third wave as well. Once we assume things are under control, we will holdameeting and withdraw it,” he continued.
We are also discussing with social charity organizations and expert doctors to accept COVID-19 confirmed patients for treatment depending on the space, in addition to oxygen plants.
Currently, COVID-19 confirmed patients are not being accepted at hospitals and being treated at their homes under home quarantine. In addition, oxygen access has been highly limited and many have died from not getting oxygen in time.
As Mandalay city has seen an increasing number of infections,astay-at-home has been imposed on seven townships.
#COVID-19 #IslamicOrganizations #Oxygen #Charity #MPA